Wikipedia talk:Gumud - Wikipedia
waxaan ubaahanahay in aan kusoo biiro
.Waxa adduunku ka warqabaa inay Soomaalidu tahay ummad siyaasadda iyo la socodka wararkaba aad ugu maskax furan marka la garab dhigo ummadaha kale ee qayrkooda ee ay isku heerka yihiin. Malaha taas waxa ugu wacan dhaqankooda ku salaysan xoolo raacatada reer guuraaga ah. Waxa la ogsoon yahay in qofka xoolo raacatada ee weliba reer guuraaga ahi uu wararka uga baahi badan yahay kan meel qudha deggen ama beer falatada ah. Sababtu waxay tahay wararka ku saabsan roobka, daaqa, jirrooyinka xoolaha ku dhaca iyo xiriirka colaadeed ama nabadeed ee beelaha intuba waxay toos saameyn ugu leeyihiin nolol maalmeedkooda. Sidaas awgeed, maadaam siyaasadduna tahay maamulka hadba meesha ka jira iyo xiriirka bulshada, Soomaalidu si aada ayey u daneysaa labada arrimood ee aan soo sheegnayba.
Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa "Beenaale marqaatigiisuu fogeeyaaye", hadalka qoruhu kor ku sheegay waxa si toosa u caddeynaya labada maahmaahood ee ay Soomaalidu ku maahmaahdo. Tan hore waxay tahay : War la qabaa xiiso male. Maahmaahdan oo aad macnaheeda wada garaneysaani waxay toos u qeexaysaa xeerka ugu weyn ee ay warfaafinta casrigu ku shaqeyso. Taas macnaheedu wuxuu yahay wakaaladaha wararka tebiya ee adduunka haddii mid ka midihi ay war soo tebiso hal ilbiriqsi ka hor kuwa kale, keeda ayaa adduunka dhami qaataa kuwa kalena warkoodu qiimo ma yeesho oo wuxuu ku dhacaa war laqabaa xiiso male. Waxa mid aad loola yaabo ah dad reer baadiye ah oo weliba reer guuraayihi inay adduunka kaga waayo aragsanaadaan kagana ilbaxsanaadaan xeerka ugu weyn warfaafinta.
Maahmaahda labaad ee iyaduna kaba sii yaabka badan tan kor xusani waxay tahay: "Sabbatiweyn haddii aad joogto himiladaada bar baa la qarsadaa." Bal marka hore, Sabbatiweyn waa buur ku taal degaanka magaalada Dhagaxbuur ee ka tirsan gobolka Soomaaliyeed ee Ethiopia. Haddii uu qoruhu waraystayna waxa la sheegay inay buurtu leedahay jaranjar dhagaxa oo dusheeda lagu fuulo, halkaasoo lagu dhagax tiro badan oo tuuran ay muuqatona inuu ka haray dhismoyaal hore oo burburay. Haddaba maahmaahda ka sokow, sheekada qudha ee Sabbatiweyn laga hayo waxay tahay inay meesha ka jirtay boqortooyo hore oo ay ka talin jirtay boqoradda loo yiqiin “Xeedho”. Dadka qaarna buurta ayeyba u yaqaanaan Sabbati-Xeedho. Intaas oo dhan marka laysu geeyo, waxa an shaki marnaba lahayn in meesha ay ka jirtay ilbaxnimo hore iyo qaab dowladeed oo boqortooyo ku dhisnaa.
Tansee yaabka yaabkiisa loona baahan yahay in la baaro oo loo fiirsado waxay tahay Sabbatiweyn oo keliya maahee waxa kale ee dhulweynaha Soomaalida ku kala baahsan tobannaan meelood oo kale oo aan wax sheeko ahna laga haynin kana muuqdaan dhismoyaal dhagaxa, godad dhulka hoostiisa iyo buurahaba laga qoday oo ay sawirro iyo faro ku yaallaan tusayana ilbaxnimo hore oo meesha ka jirtay kumanyaal sano ka hor. Waxa qoruhu aaminsanyahay raadadkaasoo dhami inay yihiin haraagii ilbaxnimo hore oo aad u da’ weyn kana horreysay kuwa la sheegsheego oo dhan, sida Sumaria (Ciraaqda manta) iyo masartii faraaciinta.
Sida culamada adduunku ay qabto, ummad taariiqdeeda waxa loo baaraa afar siyood: 1. In la derso wixii qoraallo ah ee jira kuna saabsan taariiqda ummadaas 2. Baaritaan lagu qodo dhulka degaamada hore ahaa 3. Wixii sheeko xariira ee ay daku weli sii hayaan 4. Afka ummaddaasi ku hadsho oo la darso lagana raadiyo dhaqamadoodii hore ee lumay, gaar ahaan ereyada afku sidii ay u unkameen iyo wixii laga dhex heli karo.
Inta la ‘ogyahay, awoowyadii hore ee dadka Somaaliyeed ugama ayna tegin wax taariiqa oo qoraala. Sideynu hore usoo sheegnayna, culamada taariiqda dhulka raadiyaa dalka Soomaaliyeed ugama ayna hawlgelin si hagar baxa, iyagoo saluugsanaa muuqaalka dalka iyo weliba iyagoo lafahooda u cabsanayey. Sideedaba ummadi kol haddii ayna far lahaan jirin, waxyaalaha sheeko xariirka ee ay haysaa ma dhaafsiisnaado in ka badan 200 oo sano. Intaa wixii kasii fog waa la illoobaa oo way lumaan. Marka ay haddaba arrintu sidaa tahay, waxa cad Af-Soomaaligu inuu yahay meesha keliya ee ugu dhow uguna qaraj yare e laga raadin karo dhaqamadeenii hore iyo weliba qaar ka mida taariiqda ummadda Soomaaliyeed Islaamka ka hor. Sababta Islaamka ka hor looga diganayo bartilmaameedka waxay tahay laba sababood: Waa midda horee, qorahani wuxuu aaminsan yahay dadka Af-Soomaaliga ku hadlaa inay Islaamka ka hor jireen. Tan labaadna, intii diinta Islaamku jirtay waxa la heli karaa qoraallo dhowra oo dalka laga qoray.
Haddaba qoruhu isaga oo aan aqqon gaara u lahayn cilmiga luqadaha (linguistics) ayaa laga billaabo 82dii waxa uu dareemay mudnaanta ay leedahay iyo baahida loo qabo in taariiqdii Soomaalida ee hore laga raadiyo afkeeda, gaar ahaan qaab-dhiska iyo sida ay u unkameen ereyada afku (Etymology). Inta la ‘ogyahay, qoraha hortii waxa jiray culumo shisheeye oo sannadihii toddobaatanaadkii baaritaan ku sameeyey qaab-unkanka ereyada Af-Soomaaliga, haba u badnaado nin qabiira oo Ruusha. Haseyeeshee, qorahani mar walba waxa uu aaminsanaa aqoonyahannada iyo culumada shisheeye inayna guul weyn ka gaari Karin baaritaankaas sababtoo ah dadka aan afka u dhalani wax dareena uma laha dhawaaqa ereyada iyo qaabka xubnuhu u kala goi’ karaan, iyo weliba macnaha xubini yeelan karto.
Markuu qoruhu go’aansaday inuu baaro qaab-dhiska ereyada Af-Soomaaliga iyo xubnaha erey waliba u kala baxo, waxa lagama maarmaan uu u arkay inay habboon tahay inuu si dheeraada u darso taariiqihii ilbaxnimooyinkii hore ee addunka, gaar ahaan kuwii ka jiray Afrika iyo Bariga Dhexe, diinta kiristanka iyo diinta Islaamka. Intaba qoruhu waxa uu u arkay inay xiriir iyo saameyn ku leeyihiin taariiqda geeska Afrika, gaar ahaan ta Soomaalida.
Horta intaynaan u gudbin natiijadii kazoo baxday baaritaanka qoraha, bal aynu marka hore wax ka iftiiminno wixii laga ‘ogyahay taariiqda dalka Soomaaliyeed Islaamka ka hor iyo wixii laga qoray. Waxase nasiib darro weyna , inkastoo culumada taariiqda dhulka ka baarta (archeologists) iyo kuwa ku taqasusay baaritaanka lafaha duugga (Paleontologists) ay inta badan isku raaceen in dadka adduunweynuhu ay kolkii u horreysay kazoo billaabmeen qaaradda Afrika, gaar ahaan bariga Afrika, culumadaasi marna baaritaankooda kuma ayna darin dalka Soomaalida. Waxay aad xoogga u saareen dalalka Kenya, Ethiopia iyo Tanzania, kuwaasoo ah dalal ay dowladahoodu ka leeyihiin dano gaara, kuwo dowlado kiristan ihi ka taliyaan lagana soo dhoweeyo dalxiiska reer Yurub. Dalka Soomaalida oo la wada ‘ogyahay inuu taariiq ahaan iyo jiyoolojiyo ahaan intaba ka wada da’ weyn yahay marna culumadaasi cag mayna soo dhigin. Waxa la yaabka lihi waxay tahay, culumadu ma taariiq iyo xaqiiqo raadis bay ahaayeen mise waxay daneynayeen iyaaso, ganacsi iyo dalxiis ?
Inta laga warqabo, xiriirkii u horreeyey ee xadaarad adduunka ka jirtaa ay la soo yeelatay Geeska Afrika waxay ahayd sanadii 3000 BC (saddex kun oo sano ka hor dhalashadii Nebi Ciise). Waqtigaa waxa la sheegay in doon ka timid xadaaraddii ama dhulkii loo yiqiin Sumaria (dalka manta loo yaqaan Ciraaq) ay soo gaartay xeebaha Geeska Afrika, iyadoo malaha ujeeddo ganacsi u socotay. Malaha aqristeyaasha xiisey u yeelan lahayd inay ogaadaan in reer Sumaria ay midabka Soomaalida oo kale lahaayeen disanna jireen aqallo u eg aqal Soomaaliga baadiyaha oo caw ka samaysan lehna edeggi waxaraha. Waxa kale ee iyaduna xiiso leh in sanamkooda ugu weyn ee ay caabudaan la odhan jiray MARDUUG. Haddaba sheekada laga helay burburkii xadaaraddaasi waxay sheegeysaa in MARDUUG beri uu u dhoofay dal shisheeye halkaana lagu dilay oo la xabaalay, muddo ka dibna uu soo baxay kuna soo noqday dalkiisii Sumaria. Haddaba waxa la yaab leh in magaca MARDUUG macnihiiso Af-Soomaliga uu ku noqonayo sidoo kale kii mar la duugay.
Malaha qoraalka taariiqeed ee ugu da’da weyn uguna faahfaahsan ee laga qoray dalka Soomaaliyeed waa kii ay ka qoreen masaaridii hore ama faraaciintii ninba siduu u yaqaanno. Waxa la ogyahay faraaciintu inay la lahayd dalka Soomaalida xiriir fog oo ku baahsanaa kumanyaal sano, mase cadda xiriirkaasi qoorta uu billaabmay. Haseyeeshee, qoraalka ugu faahfaahsani waa ka xiriira socdaalkii boqoraddii caanka ahayd ee Hatshepsut ay ku timid dalka Soomaalida 1500 BC (ka hor dhalashadii Nebi Ciise ama 3500 ). Boqoraddu waxa la sheegay inay wadatay 30 doonyood oo badeecad ganacsi ku raran. Hatshepsut markii ay kazoo degtay meel ka mida xeebaha dalka, waxa sheegay inay ka hor yimaaddeen boqorlkii iyo boqoraddii dalka oo markaa loo yiqiin "Puntland".
Waxa kale ee la sheegay in boqorka iyo boqoraddu Hatshepsut ku yiraahdeen: "Maxaad naga soo doontay, waatay awoowyadaa dalkan ka go’eene?" Waxa hadalka boqorku muujinayaa in xiriir intaa ka fogi soo jiri jiray muddana la kala maqnaa. Qoraalladii faraacintu ka tagtay waxa kale ee ay sheegeen in boqor kasta oo ay laayeen marka la caleemo saarayo uu marka hore xaj u tegi jiray dhulka "ilaahyada" – magic kale oo isna loo yiqiin dhulka Soomalida – halkaasoo wadaaddo lubaan ugu shidi jireen uguna ducayn jireen. Waxa kale ee dhaqankooda ka mid ahayd in boqorku (fircoonku) dhexda ku xirto boqorkii ay gabadha Soomaaliyeed dhexda ku xiran jirtay oo kale, isagoo isla markaa wata ul wagara oo uu rumeysnaa inay leedahay buruud ay cadowga ku jebiso.
Faraaciinta oo la hubo inay u ekaayeen Soomaalida, dhaqamo fara badan ayey la wadaagi jireen dadka Soomaalida afkooduna wuxuu ahaa af la walaala af-soomaaliga. Faraaciinta iyo Soomaalida labaduba waxay dhaqan u lahaan jireen inay meydka la xabaalaan qalakiisa gaar ahaaneed waxayna caabudi jireen sanamyo isku mida – kuwaasoo qoruhu gadaal ka caddeyn doono in Soomaalidu lahayd oo faraaciintu ka qaadatay. Waxa kale ee qoruhu dareensan yahay in magaca "Punt" uu ahaa awoowgii ay kazoo tafiirmeen dakii ree Puntland (? Malaha waaba Phut-kii ina Kuush Bin Xaam Bin Nuux ahaa ee Baybalku ku sheegay aayadda Genesis 10: 6) . Magacase qoraaga ka yaabiyey ee ashqaraarka ku riday waa "Dhulkii Ilaahyada".
Marka lasoo dhaafo haddaba wixii ay faraaciintu ka qortay dalka Soomaalida, qoraalada kale eek u xigay waa kuwii ay ka qoreen badmareennadii Giriigga ee la kala oran jiray Herodotus, Strabo, Pliny, Ptolomy iyo indicopleustas intii u dhaxaysay qarnigii kowaad iyo kii shanaad ka dib dhalashadii nebi Ciise. Sida ku taalla qoraaladaa, dalka Soomaalida waqtigaa waxa loo yiqiin Barbaria, dadkiisuna waxay ahaayeen Barbar. Waxay u ‘egtahay magaalo madaxda dalkuna waqtigaa inay ahayd Barbara (oo hadda Berbera loo yaqaan). Qoruhu waxa kale ee uu dareensan yahay dadka haada loo yaqaan Berberka eek u nool dalalka woqooyiga Afrika inay runtii ahaayeen Barbar sidoo kale, kana soo guureen dalkii ahaa Barbaria. Waxa kale ee iyaduna xiisole in fartii hore ee faraaciinta (Hieroglyph) la oran jiray Barba ayna ka billabmi jirtay xarafka "B". waxa haddaba la yaable in degaanka Xamarweyne ereyga "Barba" laftiisa lagaga dhaqmo, iyadoo macnaheedu yahay farta bar.
Intaa wixii ka dambeeyey, qoruhu wuxuu ereyo taariiqa oo waxtarle ka helay labada kitaab ee muqaddaska ee Injiil iyo Furqaan. Taariiq ahaan, labada kitaab waxay qiimo u leeyihiin iyaga oo da’doodu weyntahay kana hadlaya dhacdooyin markaa jiray iyo weliba kuwo hore oo lasoo dhaafay. Waxa kale ee ay wax weyn qoraha uga tareen baaritaanka ku saabsan xubnaha ay ka kooban yihiin erayada afka Soomaaligu. Tusaale ahaan, magaca ilaahay ee kitaabka baybalka hore (Old Testament) ku jira ee "Yahwe"(makii dambena loo rogay Yehova iyo Jehova ), oo afkii Yahuudda ee Cibriga ahaa, wuxuu aad ugu muuqdaa inuu la mid yahay amaseba kaba yimid ereyga af-Soomaaliga ee "Yaahuu".Afka Soomaaliga Yaahuu hadda waxa loogu dhaqmaa magangelyo laga magan gelayo wax xun ama wax halisa. Wuxuuse ereygu u muuqdaa inuu waqtigaa hore ahaa loona yiqiin magaca ilaahay oo toosa. Magaca kale ee “Pal”oo isna baybalku sheegay inuu ahaa magaca ilaahay lahaayeenna dadka reer kancaan (Cananites), wuxuu isaguna la mid yahay "Baal" oo isna macnihiisa oo kale af-Soomaaliga kule. Soomaalidu waxay oran jireen: "War side baan ku garan karaa waxa uurkaaga ku jira, ma uur-ku-baallaan ahay". Taas macnaheedu wuxuu yahay qofkii baal uurka kaga jiro ayuunbaa garan kara waxa qarsoon. Afkii Aramaygga (Aramaic), oo waqtigii Nebi Ciise noolaa lagaga hadli jiray Falastiin oo dhan, magaca ilaahay wuxuu ku ahaa "EBE" sida uu maantaba ku yahay Af-Sommaaliga. Waxa kale ee kitaabka Towraad ku yaal in nin la oran jiray "TUBAL" (waa tumaal oo la qaldaye), oo afar oday oo keliya ka tirsan jiray Nebi Aadan, shaqadiisu ahayd bir tunka (Genesis 4:22).
Waxase iyana aad la yaab u leh, in tafsiirka Quraanka ee Ibn Cabbaas sheegayo in meeshii Qaabiil ku dilay walaalkii Haabiil la oran jiray "GEERIYAAD", taasoo kitaabku sheegay inay afka cajamiga tahay macnaheeduna yahay meeshii geerida. Dalka Soomaalida, banka Geeriyaad waa lama degaanka ugu kulul ee uuna badan yahay dibqalloocu wuxuuna koofur kazoo xigaa magaalada Seylac (Zeila). Sida baybalku sheegayo, Zeila (Zilla) waxay ahayd Tubal (Tumaal) hooyadii.
Xagga afafka addunku qaybaha ay u kala baxaan, af-Soomaaliga waxa lagu tiriyaa inuu ka tirsan yahay bahyarta Kushitigga Bari (Eastern Cushitic) ee ka mida laanta Kushitigga ee qoyska Hamito-Semitic-ga. Afafka qoyska Hamito-Semitic-ga sida caadada ah waxa loo sii kala qaybiyaa laamo ka wakiila lahjado kasoo farcamay afkii waalidka ee asalka ahaa, waxayna kala yihiin Semitic, Egyptian, Berber, Cushitic iyo Chadic.
Bal haddaba iyadoo culumada afafka qaar ka mid ihi ay diideen in xiriir hidde uu ka dhexeeyo afka Chadic-ga iyo laamaha kale ee qoyska Hamito-Semitic-ga, qaar kale way oggolaadeen xiriirkaas. Sidoo kale, iyagoo sabab uga dhigaya tirade ereyada yare e ay wadaagaan afafka Kushitigga Galbeed (West Cushitic) iyo kuwa kale ee laanta Kushitigga, culumada afafka qaarkood waxay go’aamiyeen in afka Kushitigga Galbeed uu yahay laan gaarkeeda u baxda oo ka tirsan qoyska Hamito-Semitic-ga waxayna u bixiyeen Omotic. Isla kuwa kalena waxayba Omotic-ga la xiriiriyeen lahjadda Chadic-ga.
Haddaba marka la fiiriyo ismaan dhaafka weyn ee u dhexeeya culumada afafka kana imaanaya qaababka loo adeegsado kala saaridda afafka, waxay qoraha la tahay in qaababkaas lasii fidiyo. Sida horumarka cusub ee laga gaaray cilmiga hidduhu uu u caddeeyey in dadka adduunka oo dhami ay kasoo jeedaan hal qoys oo qudha, ayaa sidoo kale hadda la ogaaday in afafka adduunkuna ay hal af kasoo farcameen. Sidaas awgeed, qaabka hadda afafka loo kala sooco ee ku salaysan inta ereyada da’da weyn ee ka dhexeysa iyo qaab-naxwaha oo keliya ayaa inta badan sababa is-maan dhaafka ka dhaca culumada afafka. Haddaba waxa qoruhu qabaa sida qudha ee looga gudbi kara is-maan dhaafkaasi inay tahay in qaababka kala saarka lagu baaritaan qaab-dhiska ereyada afka (Etymology). Taasi ma kordhineyso oo keliya aqoonteena ku saabsan taariikhdii hore iyo hiddaha ummadda ee sidoo kale wax ka tareysaa in la ogaado da’da afka iyo weliba xiriirka uu la leeyahay afafka kale.
Nasiib darro, diraasadan qoruhu haddii tixgelin ay hesho waxay dood cusub ka dhex kicineysaa culumada afafka oo markoodii horeba ay ka dhex taagneyd aragtiyo kala duwan iyo is-maan dhaaf. Haseyeeshee, waxa qoruhu qabaa in kastaba ha la’ekaato astaamaha iyo ereyada uu af-Soomaaligu la wadaago afafka kale ee laanta Kushitigga e, jiritaanka ay af-Soomaaliga ku jiraan sanamyadan tirade badan ee waqtiyada fog la caabudi jiray waxay si cad u muujineysaa in afkani uu da’ weyn yahay afafka kale ee bahda la gala dhigay. Waana sababtaas sababta qoruhu uu u arko in loo baahan yahay in baaritaan cusub oo dheeraada lagu sameeyo af-Soomaaliga. Waxa cad oo muuqata in qoraalkani shaki weyn gelinayo qoraalkii jaamacadeed ee borofesoor Maxamed Nuux (PhD. UCLA 1981) kaasoo ku dooday in afka Soomaaligu gooni uga baxay afkii Kushitigga ee waalidka ahaa muddo laga joogo 3000-3500 oo sano. Waxa hadda muuqata in af-Soomaaligu ugu yaraan ka da’ weynyahay bahyarta Kushitigga Bari iyo laanta Kushitigga intaba lana heer yahay bahweynta qoyska Hamito-Semitic-ga.
Shaki la’aan ereyga ugu mudan ee qoruhu baaritaan kiisa ka billaabay wuxuu ahaa magaca ummadda Soomaaliyeed oo hadda ka hor dhowr siyood oo kala duwan loo fasiray. Bal horta marka hore magaca dadkani maaha magac shisheeye u bixiyey ee waa afkeeda hooyo waana So’maal. Af-soomaaliga so’ waxa dhahaa hilibka, oo waxa la oran jiray neefku waa so’ iyo saan- hilib iyo harag. Marka so’maal waa hilib-maal oo macnaheedu waa xoolo ku nool ama xoolo raacato. Sida taariiqda adduunku ay ka marag kacayso, qabiilku waagii hore wuxuu ka billaabmay oo uu ku salaysnaa xirfad inta uuna u gudbin hab abtir ama degaan. Sidoo kale, Soomaalida, oo qoruhu qabo inay tahay ummadda ugu da’da weyn adduunka, iyaduna waxa muuqata waayadii fogaa inay u qaybsami jirtay afar qabiil oo xirfad ku salaysnaa. Afartu waxay kala ahaayeen So’maal, Tu’maal, Baajimaal iyo Biyomaal, xirfadahaas ay ku salaysnaayeen oo kala ahaa xoolo raacato, birtume, dheri sameeye iyo beeraley.
Afarta xirfadood ee ay Soomaalidu u qayb sanaan jirtay marka laga yimaaddo, ereyga kale ee qaddarinta mudan ee ay "maal" ku jirto waa ereyga "dumaal". Marka xubnaha ereyga la kala qaado, du’ macaneedu waa geeri, maaliddanina waa ka faa’ideysi. Marka dumaali waa geerimaal maxaa yeelay qofku wuxuu dhaxlaa oori laga dhintay.
Sida Quraanka kariimka ku taal, sanamka Wad la dhihi jiray wuxuu ka mid ahaa shantii sanam ee waqtigii Nebi Nuux (Naxariisi korkiisa ha ahaatee) la caabudi jiray. Kutubaha taariiqda diimuhu waxay sheegaan in sanamkaas ay lahaayeen dadka Hamitigga oo Soomaaliduna ay ka tirsan tahay. Haddaba baaritaankani wuxuu innoo caddeeyey in sanamka Wad ay Soomaalidu lahayd ee uuna ahayn mid dadka Hamitigga oo dhan ka dhexeeya. Taas waxa u marqaati ah in dadka Soomaalida diinta u haya ilaa waqtiga manta loo yaqaan wadaad. Haddaba ereyga "wadaad" runtii wuxuu ka koobmaa laba xubnood oo kala ah "Wad" iyo "'Aad". Marka wadaadku wuxuu ahaa Wad’aad, oo macnaheedu yahay kii wad qaabilsanaa. Hamsada waxa loo tuuray fududeyn dhawaaqa oo keliya. Waxa kale ee la mida ereyga garaad oo isna markii hore ahaa gar’aad- wuxuna ahaa qareenka reerka iyo aqoon yahanka xeerka iyo garta.
Sanamka kale ee kutubaha taariiqda diimuhu ay dhaheen waxa lahaa dadka Hamitigga, balse la hubo inay Soomaalidu lahayd, wuxuu ahaa Hobal (Hoobal). Sida muuqata, sanamkan, oo waqtiga hadda ah macnihiisii isu gediyey qofka suugaanleyda ama abwaanka, waa sanamka qudha ee weli loogu hadal hayn badan yahay welina addoonsiga ku haysta suugaanta Soomaalida, sida heesaha iyo gabayada. Malaha Soomaalida xiise gaara ayey u yeelan lahayd inay ogaadaan inay carabtii jaahiliga ee Islaamka ka horreysay ay Hobal kasoo qaateen Dhulkii Ilaahyada (Soomaaliyada manta) u lana baxeen "Hubal" si ay dhawaaqa u carabeeyaan. Hubal (Hobal) wuxuu ahaa sanamka ugu weyn ee ay Qureyshi caabudi jirtay Islaamka ka hor.
Malaha qaybta ugu mudan ee baaritaanka qoruhu waxay tahay xiriirkii diineed ee ka dhaxayn jiray Soomaalida iyo Masartii hore ee faraaciinta. Baaritaankan ereyada af-Somaaliga iyo qaab-dhiskoodu wuxuu tusayaa in ugu yaraan shan sanam oo ugu waaweynaa sanamyadii ay faraaciintu caabudi jirtay inay ama la wadaagi jireen amaseba iska lahaayeen dadka af-Soomaaliga ku hadlaa. Tusaale ahaan, sanamkii faraaciinta ee ugu weynaa ama ugu mudnaa waxa la dhihi jiray Rac (marna Ra iyo Re), kaasoo ku magac baxay ilaaha qorraxda. Haddaba Rac, Ra iyo Re saddexduba waxay xubno ka yihiin ereyo af-Soomaaliga ka mida oo weliba xagga dhaqanka iyo hiddaha mudnaan kuleh. Waxa ka mida ereyga mudnaanta diineed leh ee "Gowrac". Ereygu wuxuu ka koobmaa laba xubnood oo kala ah "Gow" ama "Goo" iyo "Rac", manaheeduna wuxuu noqonayaa Rac u goo neefka qoortiisa. Isla ereygaa laftiisa afka Oromada wuxuu ku yahay "Goora’", waana sanamka qudha ee ay nala wadaagaan beesha Kushitigga Bari. Ereyada kale ee af-Somaaliga ee uu sanamka Rack u jiro waxay yihiin Garac (oo ina Rac ka dhigan) iyo Gurrac oo macnihiisu wax qalloocan ama qaldan. Xubnaha ereygu waa Gur oo bidix ah iyo Rac, taasoo macnaheedu yahay waxaasi gurta Rac ama waa qalad aan la socon xeerka rac. Sidoo kale Ra wuxuu ku jiraa magaca boqoraddi Arraweelo (oo xubnihiisu noqonayaan Ar-Ra-Weelo, kana dhigan tii Ra warkiisa yeeshay ama u hoggaansantay. Re sidoo kale isna waxa laga heli karaa magacyada Garre, Barre iyo Carre oo saddexdaba Re uu gadaal kaga jiro. Magaca Barre maaha kii barta lhaa sida loo haystee wuxuu ka kooban yahay Bar oo macnaheedu yahay roob, sida barwaaqo oo kale, iyo Re oo sanamkii la caabudayeya. Waaq oo ay Oromaduna nagu weheliso isagu sanam ma ahayne wuxuu ilaaha cirka iyo dhulkaba sameeyey.
Sanamka kale ee faraaciintii caabudi jirtay ee mudnaanta labaad lahaa wuxuu ahaa Horus. Horus oo ahaa shimbirka aboodiga loo yaqaan, waxa muuqata inay isagana kasoo qaateen Dhulka Ilaahyada. Shimbirka aboodigu waa mid weli kasii muuqda dhaqanka Soomaalida waxana looga cabsadaa umusha iyo ilmaha dhasha. Inta badan ciddiyihiisa ama lafihiisa ayaa ilmaha loo xiraa iyadoo looga cabsanayo jirro loo yaqaan geed sare oo aboodigu wato. Maadaama uu shimbirkaas aboodigu madow yahay, gobollada bari ee dhulka Soomaalida waxa Horuuse loo bixiyaa ninka madow.
Sanamka isna faraaciintu caabudi jirtay ee mudnaanta heerka saddexaad ku lahaa wuxuu ahaa kan loo yiqiin Osiris. Haddaba Giriigga oo sidoodaba ay ku adkaayeen magacyada shisheeye ayaa Osiris u qoraye magiciisa dhabta ihi wuxuu ahaa Isir. Haddaba marka ay Soomaalidu leedahay waxaa ab iyo isir midna u ma lihin, waxay u jeedaan falka sidaasa abtirna iguma soo galo, dhaqan ama diinna iiguma yimaado. Waqtiga hadda ah Isir waxa kale ee loola baxaa magac gabdheed. Isir oo faraaciintu u haysatay ilaaha aakhirada u xilsaaran, waxa dilay bay yiraahdeen Set (sanam kale oo laga yaabo inuu ahaa Seed, magaca Soomaalidu la baxdo). Sidoo kale, Soomaalidu waagii hore waxay sheegi jireen Walcan iyo Wisiir oo iyana aan ka fogeyn wixii ay caabudi jireen.
Labada sanam ee kale ee ay muuqato iyagana inay faraaciintu kala yimaaddeen dhulka ilaahyada waxay kala ahaayeen Nephdeys iyo Bes. Nephdeys oo u eg inuu ahaa "Nafdeys" waxay sheegeen qoraalada faraaciintu inuu ahaa ilaaha nafta bixitaankeeda u xilsaaran., waana sida magucu ku yahay af-Soomaaliga. Ilaaha kale ee Bes isagana waxay sheegeen inuu u xilsaarnaa marka ay naftu baxdo. Af-soomaaliga hadda bes waa qofka nafta laga dhowrayo – naftaasoo faraaciintu ay u haysteen inay la kala wareegaan Nafdeys iyo Bes.
Malaha iyaduna waxa Soomaalida xiiso u yeelan lahayd in ilaaha badda qaabilsanaa ee xadaaraddii hore ee Mayanka la dhihi jiray "Manya", iyadoo la ogyahay in maanyo af-Soomaliga ay ku tahay badda.
Haddaba magac bilaash uma baxee, sababta faraaciintu ay dhulka Soomaalida ugu bixiyeen "Dhulkii Ilaahyada" waxay ahayd dhulkaas oo ahaa xarunta ugu weyn ee diinta ama sanamyada markaa la caabudi jiray. Si kale haddii aynu u sheegno, dhulka Soomaalidu wuxuu ahaa xarunta ugu weyn ee gaalnimada ama shirkiga lagaga faafiyo adduun weynaha intiisa kale. Waxa kale ee intaa dheer, maadaama waqtiyadii hore ay diintu saldhig u ahayd xadaaradda iyo dhaqanka, waxa muuqata inay dhulka Soomaalida ka jirtay xadaarad ama ilbaxnimo da’ weyn oo ka horreysay waalidna u ahayd labadii xadaaradood ee loo haystay inay adduunka ugu horreeyeen ee kala ahaa Sumaria iyo Masartii faraaciinta.
Sidoo kale, baaritaankani wuxuu iftiiminayaa, waa tan horee, inaanuu af-Soomaaligu ka mid ahayn bahyarta lagu tiriyo ee Kushitigga bari (Eastern Cushitic) ama xataa bahweynta Kushitigga midnaba, sida ay muujiyeen sanamyada da’da weyn ee ku jira ama ka mida xubnaha ereyadiisa. Tan labaad, baaritaankani waxa kale uu iftiimiyey in, maadaama dhulka ilaahyadu uu ahaa xarunta ugu da’da weyn ee xagga diinta ee Afrika iyo bariga dhexe, ay u muuqato inay meesha ka jirtay xadaarad ama ilbaxnimo ka horreysay labadii xadaaradood ee Sumaria iyo Masartii faraaciinta. Waxa kale ee iyana intaa raacda in geeska Afrika uu yahay degaanka ugu da’da weyn ee ay wada deggen yihiin labada qolo ee Semitic-ga iyo Hamitic-ga, taasoo sii xoogeyneysa in geesku yahay degaankii ugu horreeyey ee dadku kasoo billaabmay.
W/Q:Fadxi Garaad Ciise
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia_talk:Gumud&oldid=178287"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 7 Agoosto 2018, marka ee eheed 09:27.